४८ मेगापिक्सेल क्वाड क्यामेरा भएको रेडमी नोट ९, हेर्नुस् मूल्य? - Namaste Hetauda
घर सूचना-प्रविधि ४८ मेगापिक्सेल क्वाड क्यामेरा भएको रेडमी नोट ९, हेर्नुस् मूल्य?
४८ मेगापिक्सेल क्वाड क्यामेरा भएको रेडमी नोट ९, हेर्नुस् मूल्य?
२०७७, १३ असार शनिबार १७:५४
शाओमी, ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडरले शुक्रबार नेपालमा रेडमी नोट ९ सार्वजनिक गरेको छ। यो नोट ९ सिरिजअन्तर्गतको दोस्रो फोन हो। यसबाट फोटाग्राफी र भिडियोग्राफी गर्न अन्त्यन्तै सहज हुने कम्पनीले बताएको छ। रेडमी नोट ९ ले ४८ एमपी मुख्य क्यामेरा र ८ एमपी अल्ट्रा वाइड—एंगल लेन्सले फोटो खिच्न सघाउँछ। यसको २ एमपी म्याक्रो लेन्स र २ एमपी डेप्थ सेन्सर पूर्ण क्वाड क्यामेरा सेटअपले सबै एंगलबाट सुन्दर तस्वीरहरु खिच्दछ। अधिकतम फ्रन्ट स्क्रिन डिस्प्ले आकारका लागि डिस्प्लेमा १३ एमपी क्यामेरा राखिएको छ।
यसका साथै, विभिन्न ६ क्यालिडोस्कोप अप्सनका साथ सबैले छिट्टै शुट गर्न, एकै पलमा आकर्षक भिडियो खिच्न सक्छन् र नयाँ डकोमेन्ट मोडले स्मार्टफोनलाई पकेट साइजको स्क्यानरमा रुपान्तरण गर्दछ।
यसमा ५ हजार २० एमएएच ब्याट्री जडान गरिएको छ। जसले २४ घण्टासम्म मोबाइल चार्ज गर्नबाट मुक्त गराउँछ। साथै यसमा २२.५ वाट फास्ट चार्जरको सुविधा दिइएको छ।
रेडमी नोट ९, फ्रन्टमा कर्निंग गोरिला ग्लास ५ ले सुरक्षित गरिएको इमर्सिभ ६.५३ इन्च डट डिस्प्लेका साथ नयाँ लुकमा आकर्षक देखिएको छ। यसमा ३.५एमएम हेडफोन ज्याक, आईआर ब्लास्टर जस्ता विशेषताहरु समावेश गरिएको छ। मोबाइलको सुरक्षाको लागि स्प्लेस प्रुफ न्यानो कोटिंग जडान गरिएको छ। रेडमी नोट ९ ग्राहकले यो ४जीबी र १२८जीबी भेरियन्टमा मिडनाइट ग्रे र फरेस्ट ग्रीनमा पाउँनेछन्।
रेडमी नोट ९ मी अफलाइन स्टोर, रिटेल पार्टनर र अनलाईन पार्टनर डराज र सस्तोडिलमा उपलब्ध हुनेछ। यसको मूल्य २२ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ तोकिएको छ।
प्रदेश नम्बर २ मा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रदर्शन
प्रदेश २ मा थपिए ११० जना कोरोना संक्रमित